ताजा समाचार Archives - jagritikhabar.com
८ असार, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा बुधबार बिहान ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर कम्तिमा १३० जनाको मृत्यु भएको एक अधिकारीले बताएका छन् । उनले कम्तिमा २५० जना घाइते भएका र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने आशंकामा जाँच भइरहेको बताएका छन् । भूकम्प पाकिस्तानी सीमानजिकैको खोस्ट सहरबाट करिब...
७ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य सूर्य थापाले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न नहुने बताएका छन् । चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सामाजिक...
७ असार, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् । ढिला गरी खर्च सार्वजनिक गरेकोमा माफी माग्दै शाहले आफूले चुनावमा ३ लाख ९४ हजार ४८९...
६ असार, बुटवल । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सडकमा जम्मा भएका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै सडकमा टायर बालेर केहीबेर सवारी साधनलाई चल्न नदिएका हुन् ।...
इतिहास दोहोरियो उपराष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर फेरी प्रचण्ड र बाबुराम एकसाथ !
६ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवास लैनचौरमा ब्रेकफास्ट मिटिङ भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी हाइज्याकका विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको हो । हिजो बिहान...
इन्धनको भाउ फेरि बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर कति ?
६ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ फेरि बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ र डिजेल/मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ मूल्य आइतबार राति १२ बजेदेखि नै लागू हुनेछ । अब प्रतिलिटर...
अमेरिकी सैनिक नेपाल आउँने बिषयमा बल्ल बोल्यो अमेरिकी दुतावास !
५ असार, काठमाडौं । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका नाममा अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउँन दिने सम्मको तयारीका लागी सैन्य सम्झौता गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधामन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा तयार भएको खबरले सनसनी मच्चीए पछि यस बिषयमा नेपाल स्थित राजदुतावास बोलेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समेत आफुले...
अन्तत: प्रेम आले आफैले दिने भए राजिनामा, यी ठूलो नेताको हात
५ असार, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । पाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराध अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर अपशब्द बोलेको अडियो बाहिर आएपछि अध्यक्ष नेपालले आफूले मन्त्री...
123 … 56 पछिल्ला »